Messi oo damacsan Qorshe uu isaga reebayo Ronaldo – Gool FM
Messi oo damacsan Qorshe uu isaga reebayo Ronaldo
(Europe) 14 Dis 2017. Lionel Messi ayaa damacsan qorshe uu isaga reebayo Cristiano Ronaldo isla markaana ugu caddeynayo inuu isagu yahay laacibka ugu fiican ebid taariikhda kubbada cagta adduunka.
Ronaldo ayaa usbuucii la soo dhaafay ku guuleystay Ballon d’Or markii 5-aad si uu isaga bar bareeyo Messi.
Labada laacib ee ugu fiican adduunka ayaa xoog ku heystay abaal marintan tobankii sano ee la soo dhaafay, Kaka ayaana ah laacibkii ugu dambeeyay ee ku guuleysta tan iyo sidii ay saaxada u soo koreen labada la kari la’yahay.
Kaddib markii sanadkan loo magacaabay Ballon d’Or, Ronaldo ayaa ka dhawaajiay inay tani tahay caddeyn kale oo qeexeysa inuu yahay laacibka ugu fiican Taariikhda kubbada cagta adduunka.
Laakiin waxaa sheekadaa ka biyo diiday agaasimaha Barca Josep Vives oo yiri:
“Xushmad ayaan u hayaa Ballon d’Or iyo Ronaldo.
“Waxan had iyo jeer u aragnaa isaga inuu yahay laacib wayn iyo tartame wayn.
“Laakiin halkan Camp Nou, waxaan markasta aragnaa laacib ugu fiican taariikhda , kaa oo ah Messi.”.
Don Balon ee dalka Spain ayaa warineysa in laacibka reer Argentina uu aad u doonayo inuu gabi ahaanba soo afjaro dooda ah cida fiican isaga iyo Ronaldo.
Waxaa intaa lagu daray inuu qalbiga ku hayo sidii uu Argentina sanadka soo socdo ugu hogaamin lahaa inay ku guuleysato Koobka Adduunka ee lagu qabanayo Ruushka, taa oo malaha caddeyn u noqon doonta inuu yahay laacibka ugu fiican ebid Taariikhda kubbada cagta.
30-jika ma lumin doono inuu diirada saaro horyaalka La Liga laakiin wuxuu doonayaa inuu si buuxda taam ugu noqdo koobka Adduunka.
SAWIRRO: Morata iyo Xaaskiisa oo u adeegaya Canug aan weli u dhalan
Man United oo iibineysa Mkhitaryan si ay wadada ugu sii xaarto Ozil